साढे ३३ केजी सुनले लियो तीनको ज्यान: संलग्न दुइ जनाले किन गरे आत्महत्या ? « प्रशासन
साढे ३३ केजी सुनले लियो तीनको ज्यान: संलग्न दुइ जनाले किन गरे आत्महत्या ?
तस्करीको साढे ३३ केजी सुन काण्डमा तीनको ज्यान गएको छ । एकको हत्या भएको छ भने दुईले आत्महत्या गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ–मोरङ उर्लाबारी–७ का ३३ वर्षीय सनम शाक्यको हत्या भएको एक महिनापछि अन्य दुईले आत्महत्या गरेका हुन् । तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परी हिरासतमा रहेका प्रेमलाल चौधरीले शुक्रबार आत्महत्या गरे ।
‘प्रेमलाल चौधरी शुक्रबार बिहान ४ बजे हिरासत कक्षको ट्वाइलेटमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे । उनको उद्धारका लागि प्रहरी ट्वाइलेटभित्र छिर्‍यो । पासोबाट निकाल्यो । बाँच्छन् कि भन्ने लागेर तुरुन्तै वीर अस्पताल लगियो । तर, बचाउन सकिएन । बनको घटनाको सम्बन्धमा भने थाहा भएन,’ प्रहरी वृत सिंहदरबारका प्रमुख डिएसपी अपिलराज बोहराले नयाँ पत्रिकालाई बताए ।
साढे ३३ केजी सुनसँग जोडिएर सनम शाक्यको हत्या भयो । तर, प्रहरी घटनाका मुख्य अभियुक्त मानिएका गोरे भनिने चुडामणि उप्रेती समाउन असफल बन्यो । त्यसवेला उक्त सुन रसुवाको केरुङ नाकाबाट ल्याइएको भनिएको थियो । प्रहरीको अनुसन्धान माथि नै प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा छुट्टै टोली गठन गर्‍यो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा उक्त सुन केरुङ नाकाबाट नभई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको खुल्यो । त्यसपछि अनुसन्धान एयरलाइन्सका कर्मचारीतर्फ मोडियो । यही क्रममा नेपाल एयरलाइन्स, थाई एयरवेज र फ्लाई दुबईका कर्मचारी पक्राउ परे । उनीहरूकै बयानका क्रममा अहिले न्युरोडका सुन व्यापारी पनि पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार अर्का आरोपी सानु बन पनि सुरुमा निर्धक्क नै थिए । जब उनको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर भाइबर र फेसबुक अकाउन्ट हेरियो, त्यसपछि हतास बने । प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार उनले हिरासत कक्षमै आत्महत्या गरेका हुन् । चौधरीसँगै पक्राउ परेका थापालाई भने थप अनुसन्धानका लागि शुक्रबारै मोरङस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगिएको छ ।